के गर्भावस्थामा नरिवल खाँदा साँच्चै बच्चा गोरो जन्मिन्छ ? केही भ्रम र यथार्थ यस्ता छन् « Khabarhub
के गर्भावस्थामा नरिवल खाँदा साँच्चै बच्चा गोरो जन्मिन्छ ? केही भ्रम र यथार्थ यस्ता छन्
महिला गर्भवती भएदेखि नै उसको हेरचाहका लागि मानिसहरुले विभिन्न औषधिउपचारमा जुट्छन् । महिलाको स्याहार गर्न तल्लिन हुन्छन् ।
कोही डाक्टरको परामर्श लिएर महिलाको स्याहारमा जुटेका हुन्छन् भने कोही समाजमा भएका केही भ्रमलाई यथार्थ मान्दै त्यसैको पछि दौडिरहेका पनि हुन्छन् ।
कुनै वैज्ञानिक आधारविनाका यस्ता अवधारणाहरु कहिलेकाहीँ घातक हुन सक्छन् । यहाँ हामी यस्ता केही भ्रम र तिनीहरुको यथार्थ प्रस्तुत गर्दैछौं ।
भ्रमः गर्भावस्थामा उल्टी हुनु एकदमै सामान्य कुरा हो ।
यथार्थः यो सत्य हो कि गर्भावस्थाका प्रारम्भिक दिनहरुमा उल्टी हुनु एकदम सामान्य हो । तर, यसलाई धेरै हल्कारुपमा भने लिनु हुँदैन । लामो समयसम्म उल्टी भइरह्यो भने गर्भवती महिलालाई मात्र होइन, पेटभित्रको बच्चालाई पनि असर गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ ।
भ्रमः गर्भवती महिलाले नरिवल खाए गोरो बच्चा जन्मिन्छ ।
यथार्थः नरिवल यस्तो फल हो जुन रेशायुक्त हुन्छ । यसको सेवन गर्भाजस्थामा लाभदायक पनि हुन्छ । तर, बच्चा गोरो वा कालो हुनुसँग यसको केही पनि भूमिका हुन सक्दैन ।
भ्रमः गर्भावस्थामा महिलाले दुई गुणा खानुपर्छ ।
यथार्थः गर्भावस्थाका दौरान महिलाको वजन धेरै बढ्यो भने डेलिभरी जटिल हुन सक्छ । यथार्थ के हो भने यस दौरान हरेक महिलालाई केवल ३ सय अतिरिक्त क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ ।
भ्रमः गर्भवती महिलाले एक्सरसाइज गर्दा बच्चालाई हानी गर्छ ।
यथार्थः यो एकदम गलत धारणा हो । यथार्थ यसको ठिक विपरित छ । डाक्टरहरु भन्छन् कि गर्भावस्थामा कुनै प्रोफेसनलको निगरानीमा नियमित एक्सरसाइज गर्नु राम्रो हुन्छ ।
भ्रमः ३० वर्षभन्दा बढिको हुनुहुन्छ भने गर्भवती हुने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।
यथार्थः अहिलेका महिलाहरु आफ्नो करिअरप्रति अत्यन्त सजक छन् । त्यही भएर आमरुपमा उनीहरु ३० वर्षपछि मात्रै आमा बन्न चाहन्छन् । ३० वर्षपछि आमा बन्नु कुनै गाह्रो काम होइन । एग फ्रिजिङ र आइभिएफ प्रविधिले यसलाई झनै सजिलो बनाइदिएको छ ।
भ्रमः यदि सूर्य वा चन्द्र ग्रहणका क्रममा गर्भवती महिलाले कुनै काम गरिन् भने बच्चा अपांग जन्मिन्छ।
यथार्थः यो बिल्कुल फजुल कुरा हो । यसको कुनै पनि बैज्ञानिक आधार छैन।
भ्रमः यदि डेलिभरीपछि पेटमा कुनै कसिलो बेल्ट बाँधियो भने पेट घट्छ ।
यथार्थः यो निराधार हो । यथार्थ के हो भने यदि डेलिभरीपछि महिलाको पेटलाई कसिलो बेल्टले बाँधियो भने रक्तसञ्चारमा बाधा भएर घातकसिद्द हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार ७ : ४९ बजे